आजकल, सैन्य नेताहरूको सूचीमा मार्शल आर्टको मन्दिरमा पूजा गरेको देख्दा हामी छक्क पर्दछौं कि संस्कार मन्त्रालयले मार्शल आर्टको मन्दिरबाट नभई उनीहरूको सन्दर्भ रेकर्ड गरेको थियो। Le [Lê] राजवंश तर चीनको मार्शल आर्टको मन्दिरबाट। त्यहाँ दस जनरलहरू भनिन्थ्योThap triet phoi huong"[Thếp triết phối h .ng] बाट Duong [đường] राजवंश, सहित थाई क Cong्ग [Thái Công], Truong Luong [ट्रươ Lương], Dien Nhuong Thu [Điền Nhượng Thư], टोन भो तु [Tôn Võ Tử], Ngo खोई [Ngô Khởi], Nhac Nghi [Nhạc Nghi], हान टिन [Hín Tín], Gia Cat Luong [Gia Cát Lượng], Ly Tinh [Lý Tĩnh], Ly Tich [Lý Tịch].
जे होस्, दुई जनरलहरु बाख खोई [Bạch Khởi] र Ngo खोई [Ngô Khởi] सूचीबाट हटाइयो र चार अन्य थपियो: क्वान ट्रong्ग [Quản Trọng], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh], र फाम लाइ [Phạm Lãi].
कुलमा, त्यहाँ बाह्र जना मन्डारिनहरू थिए जुन भियतनाम र चीन दुवैले पूजा गरेका थिए।
संस्कार मन्त्रालयले ध्यान दिए थाई क Cong्ग [Thái Công], Khuong थाई कांग्रेस [Khương Thái Công] (ले [Lê] राजवंशले चीनको स्टिरियोटाइपको नक्कल गर्‍यो)। यसका साथै यी पूजा गरिएका मन्डारिनहरू जुआन थु राजवंशदेखि नै प्रख्यात सैन्य नेताहरू भएको हुनुपर्छ थाई क Cong्ग [Thái Công].
यो ज्ञात छ कि चीनको मार्शल आर्टको मन्दिरमा, त्यहाँ चार जना व्यक्ति उपाधि पाउन योग्य थिए: टोन भो तु [Tôn Võ Tử], Dien Nhuong Thu [Ềiền Nhượng Thư], क्वान ट्रong्ग [Quản Trọng], Ly Tinh [Lý Tĩnh]। साथै, त्यहाँ पाँच अन्य उत्कृष्ट सैन्य क्यारियरको साथ थिए: Truong Luong [ट्रươ Lương], हान टिन [Hín Tín], Gia Cat Luong [Gia Cát Lượng], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh]। यसबाहेक, मार्शल आर्टको मन्दिरको सूचीमा त्यहाँ तीन प्रख्यात सेनापतिहरू थिएः Nhac Phi [Nhạc Phi], Luu Co [Lưu Cơ], र Vuong Thu Nhan [Vủng Thủ Nhân].
संस्कार मन्त्रालयका अनुसार, फाम लाइ [Phạm Lãi] उपासनाको लागि योग्य थिएनन्; Nhac Nghi [Nhạc Nghi] आफ्नो मार्शल आर्ट क्यारियर समाप्त छैन; Ly Tich [Lý Tích] अपमान “दासहरू”; बाख खोई [Bạch Khởi] "विजयीको हत्या गर्नु" भन्ने आरोप लगाइएको थियो। Ngo खोई [Ngô Khởi], कम इज्जतको साथ, आफ्नो पत्नीलाई मार्यो ताकि उनी एक सामान्य हुन सके। Luu Co [Lưu Cơ] शicious्कास्पद गतिविधिहरू थिए। Vuong Thu Nhan [Vương Thủ Nhân] मा पूजा थियो भ्यान Mieu [भ्यान मिअउ] (साहित्यको मन्दिर) पहिले नै। अन्तमा, सम्राट मिन्ह मंग [मिन्ह मंग] एक थप सामान्य अनुमोदित, Tu डाटा [Từ Đạt], जसले पूजा गर्न एघार जनरलहरूको सूची बनायो।
सम्राटले आत्माको साथ अनुमोदन गरेको सूचीमा संस्कार मन्त्रालय गर्व गर्थे: “हाम्रो देश, किनकि यस क्षेत्रको विस्तार भयो दीन्ह, ले, Ly, Tran [,इन्ह, Lê, Lý, Trần] राजवंश, धेरै राम्रो सेनापति थिए। क्षेत्र विस्तारको शुरुआतदेखि मध्यसम्म, हाम्रो योग्यताको पुरुषहरूको योगदान इतिहासमा रेकर्ड गरिएको थियो। जे होस्, सूची पूजा गर्न योग्य जनरल चयन गर्न अनुमोदन गरियो।
मार्शल आर्टको मन्दिर निर्माण गर्न साथ साथै साहित्यको मन्दिर, Nguyen [Nguyễn] राजवंशले फ attention्ग शुई, परिदृश्य, र वातावरणमा धेरै ध्यान दिए:
सल्लाको मन्दिर पाइन रूखहरू लगाए। मार्शल आर्टको मन्दिर बादामको रूखहरूले लगाएको।
देश बलिदान अदालतको दुई पट्टि क्यालोफिलमका दुई पows्क्तिहरू देख्न सकिन्छ
[Ván thánh trồng thông, Võ thánh trồng bàng
Ngó vô xã tắc hai hàng mù u।]
मार्शल आर्टको मन्दिर लगभग by०० मिटरको परिधि संगै किल्लाले घेरिएको थियो। भवनमा एउटा मुख्य मन्दिर समावेश गरिएको थियो जुन एक अद्वितीय वास्तुकलाको साथ थियो। मुख्य क्षेत्रमा तीन डिब्बाहरू र दुई दुबै-टसहरू थिए। अगाडिको क्षेत्र पाँच कम्पार्टमेन्टहरू समावेश गर्दछ। अगाडि बायाँ घर र दायाँ घर एक अर्कोको अनुहार थियो। मन्दिरको बाहिर एक Te sinh so [तपाईं यो पनि हो], बलिदानको लागि पशु मार्नको लागि ठाउँ।
१: भगवान र मार्शल आर्टको मन्दिर, सामान्यतया भगवानहरूको मन्दिर वा मार्शल आर्टको मन्दिर भनिन्छ।
२: स्रोत: vi.wikedia.org/wiki/Vo mieu Hue
◊ छवि - स्रोत: wikiedia.org
(देखिएको 69 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 84
← मार्शल आर्ट्सको टेम्पल - मार्शल आर्ट्सको GODS का लागि भयानक ठाउँ - भाग 1
अभ्यास VIETNAMESE मार्शल आर्ट्स, PHYSICAL गतिविधि को एक रूप →
आजको भ्रमण: 361
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,431
कुल भ्रमण: 81,963